လေနုအေး: ကျွန်မမြင်ဖူးသော စာရေးဆရာများ
Posted by တန်ခူး at 11:33 AM
လူမှားလို့ ဖြစ်မှာပါ.. ဟီးဟီး… RIT တော့ လာတယ်။ ဘော်ဘော်တွေက RIT က များတယ်။ :-)
ကိုပေါဆိုတဲ့ကောင်လေးကဟယ်… သူ့ရုပ်သူ့ရည်နဲ့ စာရေးချင်ရတယ်လို့။ တကယ်က ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ရင် အရမ်းအောင်မြင်မှာ…. လို့များ ကွယ်ရာမှာ ပြောမိသေးလားဟင်…ခွိခွိ။
စာရေးဆရာတွေနဲ့ အဲသည်လောက်ဆုံခွင့်ရတာ အင်မတန် ကံထူးပါတယ်……
I am interested you also. Because of your very nice posts.
ကိုဧရာ စိတ်ကောက်နေတယ်။ စာရေးဆရာ စာရင်းမှာရော၊ Blogger စာရင်းမှာပါ မပါလို့တဲ့။
I m interested u also . because of your very nice posts.
ညီမ ၈ တန်းကျောင်းပိတ်ရက်ကလည်း ဆရာလယ်တွင်းသားစောချစ်နဲ့ ဆရာအောင်သင်း စာပေဟောပြောပွဲကို သွားခဲ့တာ။ သူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားကြဘူး အစ်မရဲ့။ ညီမကတော့ စာအုပ်နဲ့ ဆရာလယ်တွင်းစားစောချစ်ရဲ့ စကားတိုင်းကို လိုက်မှတ်တယ်။
ရန်ကုန်များရောက်လို့ကတော့ လေထန်ကုန်းကို မရောက်ရောက်အောင် သွားချင်လိုက်တာလို့ အောက်မေ့ဖူးပေမယ့် ခုထိ မရောက်ဖူးဘူးအစ်မရေ။
စာရေးဆရာတွေကို စာခင်မိရင် လူပါမြင်ဖူးချင်တယ်။ လေးစားမိနေတော့တာ။
လူတိုင်းကိုတော့ မခင်ဘူးအစ်မရေ လူရွေးတယ်၊ စာရွေးတယ်ဗျ။ ဆရာမဂျူးကိုတော့ စဉ့်ကူဆောင်မှာလာတုန်းက မြင်ဖူးလိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်က သူ့အမေနဲ့ ဂျူးနဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတော့ မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက်လာတယ်။ သူ့ဆီမှာလည်း ဂျူးလက်မှတ်နဲ့ စာအုပ်လေးတွေ အများကြီး ယူယူကြည့်ရတာဗျ။
ဘလော့ဂ်ကလူတွေကိုခင်နေတာ အစ်မနဲ့ တူနေပြီ။
တို့လဲ ညီမ လိုပဲ။ အိမ်ကိုလာလည်တဲ့ စာရေးဆရာတွေဆို စိတ်ထဲက ခင်နေ၊ ရင်းနှီးနေရော။ စာရေးဆရာတွေချည်း အမှတ်တရ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ် သပ်သပ် ထားထားတာ။ တန်ဖိုးထားလို့လေ။
အစ်မက စာရေးဆရာတွေတော်တော်များများနဲ့ဆုံတာပဲ ကောင်းလိုက်တာ ကျနော်လည်း အစ်ကိုပြောသလို စာပဲဖတ်တာ နောက်မှ ဘလော့ပေါ်ကသူငယ်ချင်းတွေကို အရမ်းကိုခင်သွားတယ်း) ဖြစ်နိုင်ရင် ဘလော့ဂါတွေနဲ့ ဆုံ ပြီးတော့စာပေအကြောင်းတွေ ရေးဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပို့ စ်တွေအကြောင်းပြန်ပြော ပျော်စရာကြီးနေမှာပဲ ။ ဒါနဲ့ကျနော်နေကောင်းပြီး အစ်မ ရ ပို့ စ်ထဲ ထည့်ရေးထားပေးလို့ကျေးဇူးး ကျနော်လည်းကိုစေးထူးလို သီချင်းလည်းဆိုတက်တယ် ဟီးး ဒါပေမယ့် ကြားရတဲ့သူတွေက ပြိတ္တာငြီးနေသလိုပဲလို့ ပြောကြတယ်ဗျ :P ( အဲ့လောက်ကို အသံကကောင်းတာ )
အမစာတွေကို ဖတ်ရင်လည်း အမကို ခင်မင်လျက်း)
မတန်ခူးရေ.. စာရေးဆရာတွေနဲ့ အပြင်မှာဆုံဖူးတယ်ဆိုလို့ အားကျပါ့။ ဆရာလယ်တွင်းသား စောချစ်ရဲ့ သမီးနဲ့ ကျနော်နဲ့က မင်္ဂလာဒုံမှာ ၄ တန်းကနေ ၉ တန်းအထိကျောင်းအတူတက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၀ တန်းရောက်တော့ ကွဲသွားကြတာ အခုထိပဲဆိုပါတော့။ ဆရာ့သမီးနဲ့ သားရော YIT ကျောင်းကပါ။ အမတို့ သိရင်တောင် သိနေဦးမယ်။
ဆရာအောင်သင်းရဲ့ စာတွေလည်း သဘောကျတယ်။ တခြားစာရေးဆရာတွေနဲ့တော့ အပြင်မှာ မဆုံဖူးဘူး။ အရင်တုန်းကဆို ရပ်ကွက်မှာ စာပေဟောပြောပွဲတွေ လုပ်ရင် အမြဲတမ်း နားထောင်နေကျ။ အခုတော့ အဲဒီလိုပွဲတွေနဲ့ ကင်းဝေးတာလည်း ကြာခဲ့ပါပြီ။ အမက မဂ္ဂဇင်းတွေရော စာမူပို့ဖူးတာကိုး။ ဒါကြောင့် အမရဲ့ စာရေးဟန်တွေ အတွေးအရေးတွေက တကယ် ကောင်းတာ။
မတန်ခူးရေ.. အခုတလောတော့ ပျောက်နေဦးမယ်။ ဘလော့ခ်ကိုတော့ အားရင် အားသလို လည်နေဦးမယ်မ ရေ။
အင်း ပန်ဒိုရာလည်း မြင်ဖူးတဲ့ စာရေးဆရာတွေ အကြောင်း ရေးချင်သွားတယ် ဒါပေမယ့် မဖြစ်သေးဘူး
ဒါနဲ့ ဒီကျွန်းမှာ ပန်ဒိုရာကို အဲဒီ ကယ်ရီကေးချားပုံတူနဲ့ ရှာလို့ကတော့ … ဟဲဟဲ
အာ- ဒါဆို..စာရေးဆရာမ တန်ခူး လည်း..စာပေလုပ်သား အဖွဲ့ဝင်လို့ ရပြီ။း)
စာဖတ်ရင်း လူတွေပါခင်ခင်သွားတတ်လို့ ပါ...So true!
မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ စာရေးတော့ကော တန်းခူ ကလောင်နဲပဲလား. ကျတော်မသိလို့မေးတာပါ။ ကျတော်တော့ မဖက်ဖူးသေးဘူး။ ဘာကလောင်နာမည်နဲလဲ။
တန်ခူးက တော်တော်ကုသိုလ်ကံကောင်းတာပဲ။ စာရေးဆရာတွေ တော်တော်များများနဲ့ ဆုံဖူးတယ်။ ကျနော်ဖြင့် အဲဒီလို အခွင့်အရေးကို မရခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဆရာ မောင်သာရနဲ့ပဲ ဘတ်ဖလိုမြို့ကို အလည်သွားတုန်းက ဆုံခဲ့ဖူးတယ်။ ကျနော် မြင်ဖူးချင်တဲ့ စာရေးဆရာက ဆရာနန္ဒစိုး(ဆင်ဖြူကျွန်း) နဲ့ ဆရာမင်းလူ...။ ပြောရင်တော့ ရယ်ချင်မယ်။ အဲဒီဆရာတွေစာကို ဖတ်ပြီးရင် လူက ညစ်နေတာတွေ တော်တော်ပေါ့သွားလို့...။ ပြီးတော့ စာလုံးတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ကို ပေါ့ပါးအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အဲဒီလူတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဟာ အပြင်မှာ ဘယ်လိုနေပါလိမ့်လို့လဲ သိချင်တာပါတယ်။ စကားမစပ် ပြောရရင် စာလုံးတွေနဲ့ လူတွေကို စိတ်ပေါ့ပါးမှုတွေ ပေးနေတဲ့ ဘလော့ဂါ အသစ် စာရေးဆရာမ အဟောင်း မမိုးချိုသင်းကိုတော့ မြင်ဖူးတယ်ဗျို့။ အပြင်မှာလို့တော့ မထင်လိုက်နဲ့...။ :D ဆရာကြီး ဦးတင်မိုးရဲ့ အမှတ်တရ ရုပ်သံမှတ်တမ်းတခုမှာလို့ ပြောတာ။ :D ပြီးတော့ ကိုပေါတို့... ပန်ဒိုရာတို့ကိုလဲ မြင်ဖူးသေးတယ်...။ :P မထင်ရဘူးဗျာ... တကယ်ပါပဲ။ :P
အမရေ.. အမက ဒါကြောင့်အရေးအသားတွေ အရမ်းညက်နေတာကိုး...။
စာရေးဆရာမဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးအမရဲ့ စာရေးချင်ယုံသက်သက်မို့ အမတို့လို စာရေး မကောင်းတာပါ။ စာပေဟောပြောပွဲသွားဖိုဆို အိမ်က ဘယ်တုန်းကမှ လိုက်မပို့ပေးပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကလဲ မသွားချင်ဘူးအမရဲ့။သူတို့ကလဲ ညမှ လုပ်တာလေ..။ စာစီစာကုံးဆုယူတဲ့အခါပဲ စာပေဟောပြောပွဲကိုရောက်တယ်။ များသော အားဖြင့် YMCA ကကျင်းပတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲပေါ့.။ မြတ်နိုးကတော့ အိပ်နေတာများပါတယ်။ ဆုရတဲ့သူတွေ ခေါ်မှ ထတယ်။
တက္ကသိုလ်ရောက်မှ သာ ဂျူးတို့ ကို မြင်ဘူးတာ.. ဆရာမောင်စိန်ဝင်းတို့ပေါ့။ အော်ပီကျယ်လဲ မြင်ဖူးတယ် ကျူရှင်မှာ..။တွတ်ပီရေးတဲ့ ဓနုဖြူဆွေမင်းလဲ မြင်ဖူးတယ်။ ချစ်စံဝင်းက ဖေဖေ့တပည့်မို့ အိမ်လာလို့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဖေဖေက စာဖတ်ပဲ ၀ါသနာပါလို့ စာအုပ်စုထားတော့ မြတ်နိုးတို့က စာဖတ်ဝါသနာပါတာပါ။
အင်း... ရေးထားလိုက်တာ စုံစေ့နေတာဘဲ။
မြင်ဖူးတဲ့ ဆရာတွေ ဆရာမတွေကလဲ အများကြီးဘဲ...။ သက်ဝေလဲ ငယ်ငယ်တုံးက မေမေတို့ နဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေ အမြဲလိုက်သွားဖူးတယ်။ နားထောင်ဖူးသမျှထဲမှာ အကြိုက်ဆုံး ဆရာကတော့ ဆရာ ဦးအောင်သင်းပါ။
သက်ဝေလဲ တန်ခူးစာတွေကို ဖတ်ရင်း တန်ခူးကို စိတ်ထဲမှာ တော်တော်ကြီးကို ရင်းနှီးနေပါတယ်။ R I T တစ်ကျောင်းတည်းသားတွေ ကျောင်းပြီးတဲ့ နှစ်လဲ မတိမ်းမယိမ်းတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ခန့် မှန်းမိပါတယ်။
ဒါနဲ့စကားမစပ်... ကိုစေးထူးကို မေးပေးပါ။
ကိုပေါတို့ပန်ဒိုရာတို့ ကို မထင်ရဘူးဗျာ.. ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ..။ ဘာကို မထင်ရတာလဲ လို့ ...။
ကိုအန်ဒီရေ…ဒါဆို လူမှားတာပဲ ဖြစ်မယ်…
ကိုပေါရေ… စာရေးဆရာဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ…
ခုလို အားပေးစကားအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုbsfရေ…
ကိုဧရာက တကယ်စိတ်ကောက်သွားတယ်ဆို တောင်းပန်ပါတယ်… ကိုယ့်ဆရာမို့ ဘယ်တော့မှ မေ့ပါဘူးလို့ပြောပေးပါ မ ရေ…
မဇနိရေ… လွမ်းစရာ စာပေဟောပြောပွဲနေ့ တွေပေါ့နော်… ဆရာမဂျူးကို အရမ်းမြင်ဖူးချင်ပေမယ့် တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး… မဇနိကို အားကျတယ်…
မ ရေ… မရဲ့စာတွေ ဖတ်ပြီး စာရေးဆရာ မပြတ်တဲ့ မ တို့ အိမ်လေးတောင် ရောက်ဖူးချင်သွားတယ်… မ သိပ်ကံကောင်းတာပဲ….
ပန်းသီးငပိချက် အရမ်းကောင်း… တကယ်ချောတာပါ အိမ့်ရေ…
မောင်မျိုးရေ… bloggerတွေ တနေ့ နေ့ တော့ လွတ်လပ်စွာ ဆုံကြဦးမှာပါ… ကိုစေးထူးလို သီချင်းလေးဆိုပြီး blogပေါ်တင်ပါ့လား… နားထောင်ရတာပေါ့…
ကောင်းကင်ကိုရေ…ထိုင်းမှာ စာရေးဆရာတွေ တော်တော်များများရှိနေတယ် ကြားတယ်…
စကားလုံးတွေက တဆင့် ခင်မင်မှုတွေ စီးမျောသွားတာပေါ့ ဂျစ်ရေ…
နုရေ… ဆရာလယ်တွင်းသား စောချစ်က ဖေဖေနဲ့ မန္တလေးတက္ကသိုလ်ထဲက ခင်ခဲ့လို့ဆရာ့မိသားစုနဲ့ လဲ အတော်ရင်းနှီးပါတယ်… တို့ က မတောက်တခေါက် အချစ်ဝတ္ထုလေးတွေ ဟိုနဲနဲ ဒီနဲနဲ ပါဘူးတဲ့ မဖြစ်ညစ်ကျယ် စာရေးသူအဆင့်လောက်ပါ နုရေ… နုpostအသစ်လေးတွေ မျှော်နေမယ်နော်…
ရေးပါပန်ရေ… ပန်ရေးရင် ဖတ်လို့ အတော် ကောင်းမှာပါ… တို့ ပုံကို မြင်ကြည့်တော့ ဘယ်လိုကြီးလဲဟင်…
မကေရေ… ဒါလေးတခုတော့ ချမ်းသာပေးပါ… ကျွန်မက စာရေးဆရာ မဟုတ်ပါဘူး… စာရေးဆရာရူး ရူးတဲ့အဆင့်မှာပါ…
ရှင်ရေ… ဟုတ်တယ်နော်… ကလောင်ကတဆင့် နှလုံးသားတွေ အထိ နွေးထွေးခင်မင်သွားတာလေ… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးနော်.. နောင်လဲ လာလည်ပါဦး…
ကိုပုလုကွေးရေ… တန်ခူးနာမည်ကို ဒီblogနဲ့ အတူ မွေးဖွားတာပါ… ကျွန်မ စာရေးတုန်းက တခြား ကလောင်နာမည်နဲ့ ပါ… ကျွန်မ RITကျောင်းသူဘ၀တုန်းက အချစ်ဝတ္ထုလေးတွေ ဟိုနဲနဲ ဒီနဲနဲ ကျိုးတိုးကျဲတဲ ပါဘူးတဲ့ အဆင့်လောက်ပါ… ကျောင်းပြီးထဲက စာဆက်မရေးဖြစ်တော့တာ ဒီblogရေးမှ ပြန်ရေးဖြစ်တာပါ…
ကိုစေးထူးရေ… ဆရာမောင်သာရကို မြင်ဖူးတာ ကံကောင်းတာပေါ့… ကျွန်မမြင်ဖူးချင်ပြီး မြင်တွေ့ ခွင့်မရလိုက်တဲ့ စာရေးဆရာနှစ်ယောက်က ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်နဲ့ဆရာမကြီးဂျာနယ်ကျော်မမလေးတို့ ပါ… ကိုပေါနဲ့ ပန်က ကိုစေးထူး ထင်ထားတာထက် ပိုချောနေတယ်မိုလား… သိနေတယ်လေ……
မြတ်နိုးရေ…စာရေးဆရာအဆင့် မဟုတ်ပါဘူးညီမရေ… အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို စာရေးဆရာရူး ရူးတဲ့အဆင့်မှာပါ… ဆရာချစ်စံဝင်းကိုလဲ စာပေဟောပြောပွဲမှာပဲ တွေ့ ဖူးတယ်….
သက်ဝေရေ… ဆရာအောင်သင်းကတော့ စာပေဟောပြောပွဲမှာkingလို့ပြောရမလားပဲ…
မတန်ခူးရဲ့ ငယ်ဘ၀ကို အားကျပါရဲ့။ ပုံရိပ်လည်း စာရေးဆရာတွေဆို သိပ်အထင်ကြီးတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သူတွေကို ပေါ့။
ကျေးဇူးပါ မအယ်ဇီရေ… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်….
ဟုတ်တယ်နော် ပုံရိပ်ရေ… ၀ါသနာအရင်းခံကြောင့်ထင်တယ်… လာလည်တာကျေးဇူးပါ…နောင်လဲလာခဲ့နော်….